Haweeney Madaxweyne aheyd oo gabar ay Saaxiibo yihiin awgeed xilkii looga xayuubiyey (Daawo Sawirro) - iftineducation.com
Haweeney Madaxweyne aheyd oo gabar ay Saaxiibo yihiin awgeed xilkii looga xayuubiyey (Daawo Sawirro)
aadan21 / December 11, 2016
iftineducation.com – Baarlamanka dalka Koonfur Kuuriya ayaa xilkii ka xayuubiyay madaxwaynihii dalkaas haweeneyda la yiraahdo Park Geun-hye.
Xildhibaanada baarlamanka dalkaas oo gaaraya 300 ayaa waxaa madaxweyne Park Geun-hye kalsoonida kala laabtay 250 ka mid ah.
Marka la fiiriyo tirada badan ee xildhibaanada ah ee u codeeyay in xilka laga qaado waxay cadayn u tahay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay isku xisbiga yihiin ay ka qaybqaateen kalsooni kala noqoshadeeda.
Ra’isul wasaaraha dalkaas Hwang Kyo-ahn ayaa dalkaas madaxweyne ku meel gaar ah ka noqonaya inta laga soo dooranayo madaxweyne kale.
Kumanaan dad ah oo caraysan ayaa joogay banaanka dhismaha baarlamaaanka iyagoo doonayay in xilka laga qaado Madaxwaynaha.
Park ayaa wajahaysay fadeexad siyaasadeed oo horseeday mudaaharaaadyo badan taasoo salka ku haysa gabar ay saaxiibo yihiin oo la sheegay inay kalsoonidaas u adeegsatay inay dano gaar ah ku fushato.
Eedeymaha waxaa ka mid ah 65 milyan oo dollar oo loogu deeqay hay’ado gargaar oo been abuur ah iyo qandaraasyo dhowr ah oo la siiyey Choi Soon-sil, kuwaasoo ay ka faa’iidayaan ayada iyo madaxweyne Park.
Dacwad oogayaashu waxay sheegeen in Park ay door ku leedahay musuqmaasuqa ay samaysay saaxiibadeed, laakiin eedaymahaas wey iska fogeysay, inkastoo aysan cadeymo sax ah keenin.
Codbixinta ka dib ayaa guddoomiyaha baarlamanka Kuuriyada Koonfureed Chung Se-kyun waxa uu ku baaqay in laga soo kabto kala qeybsanaanta siyaasadeed ee curyaamisay dowladda.
noocyada wasmada dumarka
Xaaska Madaxweyne shacabkiisu baahan yihiin oo faraanti ku iibsatay 1.4 milyan oo dollar (Daawo Sawirro)